BASELWORLD 2018 - Safar raaxo leh Adeegga bedelka Basel -
Sannad kasta guga, Basel wuxuu hoy u yahay hal usbuuc in ka badan shirkadaha 1,800 oo soo bandhigaya saacadahooda iyo dahabiga on Baselword. Abaabulayaasha carwadan ee muhiimka ah ayaa ka cabanin muhiimada martida. In ka badan tafaariiqda 100,000 iyo wakiillo ka socda jumladaha ayaa laga filayaa inay ka soo qayb galaan Ciyaaraha Caalamka ee Munaasabadaha iyo Dhuxusha. Bishii Maarso 22, 2018 albaabbada caddaaladda ayaa u furan martida.
Iyadoo wadahaaga shakhsi ahaaneed BASELWORD - Adeegga Bedelka Basel
EuroAirport Basel waa dhowr daqiiqo oo keliya oo ka baxsan saldhigga bandhigga. Laakiin hubaal - sida dad badan oo kale oo ganacsato ah - waxaad jeclaan lahayd inaad soo booqato farsamoyaqaanada 'dhawr maalmood. Mar labaad iyo mar kale rakaabkayaga waxay samaynayaan inta ugu badan maalmaha ugu adag ee sannadka ganacsiga. Taasi waa sababta aan ugu adeegno adeeg gaar ah oo loogu talagalay xilliga Baselworld.
EuroAirport balamadaada. U safar safar a naqshadaynta fasalka koowaad ee naqshad jarmal ah oo ha ka welwelin meelo caan ah ama baarkinnada baarkinka ee saldhigga bandhigga. Marka lagu daro waqtiyada ku habboon iyo u roonaanta rakaabkeena, waxaynu caan ku nahay ganacsatada, sababtoo ah waxaan ku fiirsaneynaa go'aanka ugu weyn marka aad wadid baabuur.
Adeeg baska Basel si sahlan ayaa online ah
Waan ognahay - wakhtigu waa lacag. Taasi waa sababta aan u dhisnay barta internetka qalab aad adiga. Iyadoo hal saacad kaliya ku jirta, waxaan kuu diyaarineynaa sidii laydhin gaar ah iyo chauffeur oo ku yaalla hareeraha hoteelkaaga ama garoonka ku yaala goobaha imaanshaha iyo ka baxa.
Kooxda Basel ee ku soo wareejinta waxay jeclaan laheyd joogitaan xiiso leh oo ku yaal Baselworld iyo marwalba ganacsi wanaagsan
Waxaa lagu calaamadeeyay: Gaadiidka garoonka Basel Baselworld Adeegga wareejinta
taxi.flughafen Maarso 16, 2017 November 18, 2017 Uncategorized Faahfaahin la'aan
← BASELWORLD 2018 - Waxay ku haboontahay inay la socoto Adeega Bedel Basel
Safarada Magaalada iyo Bandhiga Baska Basel →